Ciidamada Dowladda Somaliya ee Gobolka Gedo oo kala shakisan. | Ciidamada Dowladda Somaliya ee Gobolka Gedo oo kala shakisan. – Latest News
« Madaxwayne Gaas iyo Xildhibaanadii Garoowe tagay oo soo saaray Go’aan ay…
Ciidamada Uganda oo Mushaar la’aan ka cabanaya. »
Ciidamada Dowladda Somaliya ee Gobolka Gedo oo kala shakisan.
Saraakiisha Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ku sugan Degmada Baled-xaawo ee Gobolka Gedo ayaa waxaa soo kala dhex galay Shaki ku aadan in qaar kamid Saraakiisha Ciidamadaasi ay la shaqeeyaan Al-shabaab.
Sababta arintaas ayaa lagu ogaaday ka dib markii Bishaan gudaheeda Saddex Gaari oo ah Nuuca Dagaalka ah lagala Goostay Ciidamada Dowladda ee ku sugan Degmada Baled-xaawo,kuwaas oo Al-shabaab Gacanta loogaliyay.
Cornel Cabdi Buule Cabdille oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Gedo ayaa shaagay in Gaari Cabdi Bile ah oo uu lahaa Shalay loo gacan galiyay Al-shabaab.
Cabdi Buule ayaa sheegay in Gaariga uu ka Xeeyay in Shacab ah oo Xerada Ciidanka ka waday islamarkaana aan Ciidamada ka tirsaneeyn,taas oo loo maleenayo in Rag ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Dowladda Soomaaliya ay Xariir laleeyihiin Al-shabaab.
“Hore sidoo kale Dad aan ka tirsaneeyn Ciidamada ayaa Gaadiid dagaal kala Fikaday Ciidamada oo Al-shabaab u Gacan galiyey,Saraakiisha ayaa qaar Al-shabaab Xariir laleeyihiin”ayuu yiri Cabdi Buule.
Dhamaadkii Sadandkii hore ayey aheyd markii Saldhi Ciidan oo ku yaala Degmada Baled-xaawo laga siidaayay Sargaal Al-shabaab ah oo ka tirsan Ajaanibta ka barbar dagaalama,iyadoona Arinta ay Cirka isku shareertay.